Electronic Qaybaha Company, Electronic Chip Iibso - Xi Da
Mid ka mid ah in Mid ka mid ah Adeegyada Online
Device Ogaanshaha iyo System Control Quality
XIDA Electronics ma aha oo kaliya qeybiyaha ah qaybaha electronic one-stop, laakiin sidoo kale waxay bixisaa adeegyada aad u baahan tahay marka la isticmaalayo alaabta fiiro dheeraad ah. Tan iyo dhisidii, shirkadda ayaa la siiyaa qaybaha elektarooniga ah ee asalka ah iyo taageero farsamo si ay macaamiisha ka 20+ warshadaha.
Energy New (3%)
Supply Power (18%)
The Macaamiisha Waxaan Ku darso
XIDA Electronics waa alaab-caalami ah oo wax soo saarka, adeegyada iyo xal dhamaystiran macaamiisha ee warshadaha qaybaha elektaroonik ah oo aan lahayn waayo-aragnimo ballaaran ee goobaha isgaarsiinta, nidaamyada macluumaadka, gaadiidka, caafimaadka, wax soo saarka warshadaha iyo macaamiisha qalabka korontada.
Tan iyo dhisidii ka badan 20 sano ka hor, shirkadda ayaa had iyo jeer loo hogaansamey mabda'a "Customer First" oo ujeedadiisu tahay in "keena ugu badnaan faa'iidooyinka macaamiisha" by siinaya macaamiisha ay la tayada sareeya iyo kuwa ugu tartanka badeecooyinka iyo adeegyada jaban . XIDA Electronics waxaa ka go'an in ay macaamiisha siiyaan qaybaha asalka ah oo tayo sare leh-isku halayn karo oo la baakadahooda.